Barashada luqad qalaad daawashada filimaanta ama animes iyo baahida loo qabo in lagu daro subtitles sax ah? Ma rabtaa inaad wax ka bedel subtitles kuu gaar ah si ay u abuuraan filim cusub oo laakiin aadan aqoon sida? Haddii tani ay tahay kiiska, qodobkan kugu habboon. Hayso skim deg deg ah halkan.
Qaybta 1aad: Sida loo dar subtitles bixi in a movie
Qeybta 2: Sida loo dar iyo subtitles edit in a movie
reading dheeraad ah: Waa maxay subtitles? Hardsub ama softsub?
Qaybta 1aad: Sida loo dar subtitles soo bixi inay filim
Waxaa jira wax badan oo software si wada midowdo subtitles iyo videos. Laakiin si dabiici ah, ee Wondershare waxaan ku talinaynaa Video Converter Ultimate taas oo keliya ma aad u saamaxaaya in ay subtitles daro in file filim, laakiin sidoo kale kuu ogolaanaya in aad ku darto subtitles in video ah oo ayan u hurin si DVD loogu daawashada TV-ga. Hadda ku daray Cinwaan iyo DVD gubanaya la software dhan-in-hal, ma qalab dhinac saddexaad loo baahan yahay.
Waa maxay video iyo qaabab Cinwaan taageerto?
Video qaabab : AVI, MP4, MKV, wmv, Mpg, MPEG, VOB, TOD, mod, FLV, iyo dhammaan qaabab video joogto ah.
Qaabab Cinwaan : SRT, dameer, SSA
Ka dib markii ay soo degsado files Cinwaan ka Internet , waxaad kala socon kartaa tallaabooyinkan fudud si subtitles daro in filim waqti lahayn, oo aan ka kaaftoomi kasta.
Talaabada 1: dejinta filim aan Cinwaan
Burcad barnaamijka iyo movie dejinteeda files by jiidayeen video in daaqadaha hoose, ama adigoo gujinaya "Add Files" button in aad ku darto files filim ka furmo suuqa browser ah.
Tallaabo 2: Ku dar subtitles in Movies
Riix "Edit" button on video ah laga keeno inay soo qaadaan suuqa kala video tafatir ah.
Tag "Cinwaan" tab ugu sarreeya iyo riix "+" badhanka si ay u dajiyaan files Cinwaan dibadda (.srt, .ssa, .ass).
Ka dib markii Cinwaan waxaa ku raran yihiin, aad ku eegaan karo in Falanqeynta daaqadaha xaq u leh style default. By hubinta ikhtiyaarka "T", waxaad bedeli kartaa qaabka Cinwaan by font, midabka, size, booska, hufnaan, iwm
Haddii wax walba si fiican u dhacaan, riix batoonka "OK" si loo xaqiijiyo goobaha iyo xir suuqa kala tafatir ah.
Fiiro Gaar ah: Waxa kale oo aad ku dari kartaa watermark text ama watermark image si aad video furmo video tafatir ah.
Talaabada 3: movies Output la Cinwaan sida video ama gubi in DVD
On daaqadaha aasaasiga ah, doortaan qaab la doonayo wax soo saarka ka mid ah liiska qaabka wax soo saarka. Halkan, waxaad dooran kartaa qaab video ama qaab qalabka sida qaab wax soo saarka. Ugu dambeyntii, guji "Beddelaan" ama "Guba" button in qoraal ahaan Cinwaan in aad movie. Haddii aad rabto in aad ku gubi filimada la Cinwaan in DVD, Tallaabada 1, waa in aad soo dhoofsadaan files ee "Guba" interface halkii interface ah "Beddelaan".
Dhammaan sameeyo. Iyadoo Video Converter , inaad filim ku dari kartaa subtitles u ciyaaro mid ka mid ah oo ku saabsan PC, qalab ama TV.
Qeybta 2: Sida loo dar iyo edit subtitles in ay filim
Si aad ku dari iyo subtitles edit afkaaga si filim, Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ) gargaaree weyn. Barnaamijkan qoreysa Jadwalka ku salaysan video tafatirka, waxayna siisaa khayraadka hodanka ah, waayo, waxaad ka soo xusho oo dheeraad ah u astaysto. Sidaa daraadeed, waxaad samayn kartaa subtitles shakhsiga in lagu daro in filim aad caddayn doonaa qof kasta. Hoos waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo waa talaabo talaabo ah.
Download Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) maxkamad free hoos ku qoran:
In socda, version Windows loo qaato sida tusaale si ay u sharxaan sida subtitles in lagu daro in hab fudud filim. Haddii aad tahay qof user Mac ah, waxaad isticmaali kartaa isku tallaabooyin ama tixraac Hanuuniye faahfaahsan user u Mac .
Talaabada 1: dejinta ilaha videos
Burcad barnaamijkan, ka dibna dooro "16: 9" ama "4: 3" in la abuuro mashruuc cusub. Ka dib markii in, guji "Import" ama jiitaa sii jeedi videos si toos ah ay suuqa kala hoose.
The videos daray muuqan doonaa sida thumbnails in User ee Album. Waxaad laab laabi karo guji video clip ah in Falanqeynta uu furmo suuqa screen midig. Marka dhan files si habsami leh ku raran yihiin, jiididda iyo iyaga hoos u Timeline Video ah (Waxay la wada biireen doonaa file hal).
Talaabada 2: Embed subtitles in video
Tag ah "Text" tab kor ku xusan Jadwalka ah, iyo soo qaado template ah aad jeceshahay in aad dalbato in aad video by jiitaa-n-dhibic ama xaq u leedahay in ay doortaan magcaabo "codso". Waxay ku tusi doonaa sida "T" icon on Timeline Text ka, waxaad u soo jiidi kartaa meel kasta oo aad video.
Click on Double "T" icon si ay u helaan meel edit ah, markaas qorshee qoraalka adiga kuu gaar ah, la beddelo font, midabka, qaabka, animation, iyo in ka badan.
Tallaabo 3: Ku bilow subtitles si aad filim gubanaya
Marka aad dhamaysato subtitles tafatirka, guji "Abuur" si loo badbaadiyo abuurka. In uu furmo suuqa wax soo saarka, waxaad dooran kartaa qaab caan ah wax soo saarka sida AVI, MOV, wmv, MP4, soo qaado qaab qaybiyay u qalab gaar ah, ama ku gubi in DVD ah ee loo maqli karo ee ciyaaryahan DVD caadiga ah ama TV.
Subtitles waa versions qoraal ah wada hadal ku filimada, barnaamijyo TV, animes, kulan video, iwm, caadi ahaan lagu muujiyey hoose ee screen.People aan fahmi karo wada hadalka hadlay weli garan karin waxa ka ciyaaro by daawashada filimaanta subtitles. Waxa kale oo hab fiican si ay u bartaan afka qalaad ku daray subtitles.
Inta badan Waxaa jira laba nooc oo subtitles - softsub iyo hardsub, kuwaas oo sidoo kale ku daray in ay filim ku meel gaar ah ama si joogto ah ula kala duwan software.Accordingly, waxaa jira laba hab oo si subtitles daro in filim ama video: hardcode ama softcode. Hore ayaa ku dari doonta subtitles in ay filim si joogto ah (ee loo yaqaan hardsub), halka dambe (aka softsub) optionally yaabaa Qarinaysaan ama tuso, si loo waafajiyo baahidaada.
Wixii intaa raaciyay softsub, VLC Media Player iyo gargaare weyn. Ka dib marka aad soo dajiyo iyo abuurtaan VLC, riix Video> Cinwaan Track> Load File ku darto subtitles aad. Haddii aad rabto in aad subtitles daro in filim in iman mayso subtitles, kuu gudbin karaan hababka kor lagu sharaxay.
> Resource > Video > Sida loo dar subtitles in Movie ah